Factlọ ọrụ na-emepụta gwongworo - China Truck scale Manufacturers, Suppliers
Olulu IGHdị arọ
General Okwu Mmalite:
Itdị olulu mmiri dị mma maka ebe nwere ohere pere mpe dịka mpaghara na-abụghị ugwu, ebe olulu olulu abụghị ihe dị oke ọnụ. Ebe ọ bụ na ikpo okwu dị larịị na ala, ụgbọ ala nwere ike ịbịaru eriri ahụ site n'akụkụ ọ bụla. Otutu ndi mmadu na-acho nma.
Ihe ndị bụ isi bụ nyiwe jikọrọ ibe ha ozugbo, enweghị igbe njikọ n'etiti, nke a bụ emelitere emelitere dabere na nsụgharị ochie.
Ihe ohuru ohuru na eme nke oma karie igba obara. Ozugbo emepụtara atụmatụ a, ọ na-ewu ewu ozugbo na ahịa ụfọdụ, a na-arụ ọrụ ya iji rụọ ọrụ dị arọ, ugboro ugboro, kwa ụbọchị. Okporo ụzọ buru ibu na ịgafe n'okporo ụzọ na-atụle.
Ekpo ọkụ gbanyere gealvanized agbata n'olulu arịgoro MA Ọ B P pitilaiti arịgo
* Efere nkịtị ma ọ bụ efere achicha bụ nhọrọ
* Mejupụtara 4 ma ọ bụ 6 U ibé osisi na ọwa C, siri ike ma isiike
* Middle dissected, na bolts njikọ
* Ugboro abụọ shiee doo ibu cell ma ọ bụ mkpakọ ibu cell
* Obosara dị: 3m, 3.2m, 3.4m
* Ogologo ọkọlọtọ dị: 6m ~ 24m
* Max. Ike dị: 30t ~ 200t
Pellet gwongworo n'ọtụtụ
High-nkenke ihe mmetụta ga-egosi ihe ezi na-erikpu
Igwe ahụ dum dị ihe dị ka 4.85kgs, ọ dị obere na obere. N'oge gara aga, ụdị ochie ahụ karịrị 8 n'arọ, nke dị ka ihe siri ike ibu.
Fechaa imewe, n'ozuzu ọkpụrụkpụ nke 75mm.
Ngwa nchekwa dị n'ime ya, iji gbochie nrụgide nke ihe mmetụta. Akwụkwọ ikike f otu afọ.
Aluminom alloy ihe onwunwe, ike na inogide, sanding agba, mara mma na-emesapụ aka
Igwe anaghị agba nchara n'ọtụtụ, mfe ọcha, nchara na-àmà.
Standard chaja nke gam akporo. Naanị otu ụgwọ, ọ nwere ike ịdịru awa 180.
Pịa bọtịnụ “ntụgharị ntụgharị” ozugbo, nwere ike ịgbanwe KG, G, na
Aka Pallet scale - Opyional Bọmbụ mgbawa na - egosi ihe ngosi
Typedị ụdị pallet gwakọtara ọnụ ọgụgụ a na-akpọkwa pallet truck scales nke na-eme ka ọ dị mfe.
Jikwaa ngwongwo ngwongwo pallet nwere ike iburu ngwongwo mgbe ị na-agagharị kama ibugharị ibu ahụ n'ọtụtụ. Ọ nwere ike ịchekwa oge ọrụ gị, melite arụmọrụ gị. Dị iche iche na-egosi nhọrọ, ị nwere ike họrọ dị iche iche na-egosi na pallet size dị ka gị spplication. Akpịrịkpa ndị a na-enyefe ma ọ bụ gụọ nsonaazụ a tụkwasịrị obi ebe ọ bụla ejiri ha.
Concrete oche n'ọtụtụ maka ịdị arọ n'elu-n'okporo ụzọ iwu ugbo ala.
Ọ bụ ihe mejupụtara mejupụtara ya na-eji akwa ihe eji arụ ọrụ ọla eji arụ ọrụ. The ihe pans si ụlọ ọrụ dị njikere na-enweta ihe enweghị ihe ọ bụla n'ọhịa ịgbado ọkụ ma ọ bụ rebar pụrụ isi chọta achọrọ.
pans si ụlọ ọrụ mmepụta ihe dị njikere ịnata ihe na-enweghị ihe ọ bụla n'ọhịa ịgbado ọkụ ma ọ bụ rebar pụrụ isi chọta achọrọ.
Nke a na-eme ka nrụnye dị mfe ma na-ahụ ezigbo ogo nke oche ahụ.
AKWKWỌ AKW /KWỌ / AKW BKWỌ AKW /KWỌ NA AH AND
Mepụta ebe nchọpụta nkwụsị na-enweghị nkwụsị, ma nakọta ozi ụgbọ ala ma kọọrọ ụlọ ọrụ njikwa ozi site na usoro ntụgharị ọsọ ọsọ ọsọ.
Ọ nwere ike ịmata nọmba efere ụgbọ ala yana sistemụ nchịkọta saịtị iji gosipụta ụgbọala ahụ buru ibu site na usoro njikwa njikwa sayensị nke overlad.
A na-eji ya na-eri ihe dị ala dị ala na njem, ihe owuwu, ike, nchekwa gburugburu ebe obibi na ụlọ ọrụ ndị ọzọ; nkwekọrịta azụmahịa n'etiti ụlọ ọrụ, mines na ụlọ ọrụ, na nchọpụta axle ibu nke ụlọ ọrụ njem. Ngwa ngwa ngwa ma dịkwa mfe, rụọ ọrụ dị mfe, ntinye na ndozi dị mfe. Site na ịdị arọ nke axle ma ọ bụ axle otu arọ nke ụgbọala, dum ụgbọala arọ bụ enwetara site na ìgwè. Ọ nwere uru nke obere ala ohere, na-erughị ntọala ụlọ, mfe ibugharị, ike na static sọrọ ojiji, wdg
Na nchara ramp, na-ewepu ọrụ ntọala obodo ma ọ bụ ihe mgbochi ga-arụ ọrụ, nke ga-achọ ọrụ ntọala ole na ole. Naanị ihu ọma siri ike na nke dị larịị ka achọrọ. Usoro a na - enweta nchekwa na ego nke ntọala obodo yana oge.
Site na rampu nchara, enwere ike ịmeghasị ihe dị arọ ma jikọta na obere oge, enwere ike ịkwaga ya oge niile na mpaghara ọrụ. Nke a ga - enyere aka na mbenata ụzọ dị anya, mbelata njikwa ego, ike mmadụ, yana mmụba dị mma na arụpụtaghị ihe.
Static electronic Railway scale bụ a na-erikpu ngwaọrụ maka ụgbọ oloko na-agba ọsọ na ụgbọ okporo ígwè. Ngwaahịa nwere usoro dị mfe na akwụkwọ ọhụụ, ọdịdị mara mma, oke ziri ezi, mmụba ziri ezi, ọgụgụ ọgụgụ, ọsọ ọsọ ọsọ, arụmọrụ siri ike na ntụkwasị obi, wdg.
Nrụ Ọrụ Dị arọ Digital Floor Scales Industrial Low Profile Pallet Scale Carbon Steel Q235B
Ogwe ala PFA221 bụ azịza zuru oke na-agwakọta usoro ikpo okwu na ọnụ. Ezigbo maka ịkwanye ụgbọ mmiri na ụlọ ọrụ izugbe, usoro ikpo okwu PFA221 na-egosipụta ihu igwe diamond na-enweghị atụ nke na-enye nzọ ụkwụ dị mma. Ọnụ dijitalụ na-arụ ọrụ dịgasị iche iche, gụnyere gụnyere ịtụ nfe, ịgụta, na mkpokọta. Ngwungwu a emezigharị nke ọma na-enye ntụgharị ziri ezi, a pụrụ ịtụkwasị obi na-enweghị ọnụahịa nke atụmatụ ndị a na-achọghị maka ngwa nyocha.
5 ton Digital Platform Ft Scale with Ramp / Portable Industrial Floor Scales
Akpịrịkpa Smartweigh dị na ala jikọtara ezi izi ezi na njigide iji guzogide gburugburu ụlọ ọrụ mmepụta ihe siri ike. Ejiri igwe nchara ma ọ bụ nke a na-ese carbon rụọ nke akpịrịkpa ndị a na-arụ ọrụ dị arọ ma kee ha ka ha wee nwee ike ịchọta ọtụtụ mkpa nke ụlọ ọrụ mmepụta ihe, gụnyere ịkpo ọkụ, njuju, ịlele, na ịgụ. Standard ngwaahịa na-ese nwayọọ nchara ma ọ bụ igwe anaghị agba nchara na 0.9 × 0.9M ka 2.0 × 2.0M nha na 500Kg to10,000-Kg ikike. Nkume-ntụtụ imewe ana achi achi repeatability.
3 Ton Industrial Floor weighting Scales, Warehouse Floor Scale 65mm Platform Elu
PFA227 dị na mbara ala na-ejikọ ụlọ siri ike, ebe dị ọcha. Ọ na-adịgide adịgide iji nye ihe ziri ezi, nke a pụrụ ịdabere na ya ka ọ na-eguzo ọtọ mgbe niile na mmiri na gburugburu corrosive. Mere kpamkpam nke igwe anaghị agba nchara, ọ kwesịrị ekwesị maka ịdị ọcha ngwa na-achọ Ugboro washdown. Họrọ site na ọtụtụ ịmechara nke na-eguzogide ọkọ ma bụrụ oke dị ọcha. Site na mbenata oge na mbọ achọrọ maka ihicha, ọkwa PFA227 dị n’ala na - enyere gị aka ịbawanye arụpụta ọrụ.
Mmezi Mass, Mmezi arọ Set, Akwụkwọ Akara Asambodo, Akara Calibration Weight, Shear Bead Ibu Ibu, Mmezi arọ N'ihi Digital Akara,